Somaliya Maanta Heerka Ay Taaganthay!!!
Hadaad tahay Daarood, hadaad tahay Hawiye, hadaad tahay Dir. Dunidan aynu joogno maanta Somali magaca la dhaho ayaanba wax macno ah khasaaro iyo foolxuma mooye wax ku fadhin, oo xitaa hadii la sarifo uusan gaari karin hal qof magaciisa sida magaca la dhaho McDonalds oo isagoo ahaan jiray nin Maraykan ah oo asalkiisu kasoo jeedo Scotland ayuu dunida keenay makhaayad caan ah oo meel walba dunida ka furan.
Car yaa ii sheegi kara in magaceenu maanta ka fiicanyahay waraaqda xaarka la isaga tiro ee la dhaho (Toilet roll). Saa taas intifaac iyo macno ay dunidoo dhan u leedahay ayaaba jira.
Soomaali hadeynu nahay dunidan Ilaahay inagu beeray maxaynu kusoo biirinay oo aadamiga ku dhaqan u keenay. Waxaan halaag, foolxumo iyo dhibaato aan ahayn maxaynu kaloo keenay?
Soomaalidu maalin baa imaanaysa in laga taariikheeyo oo laga qoomameeyo nin waliba wuxuu gaystay. Waxaan hubaa in ay imaanayso maalin kuwii iyagu laga caqli badiyey ee qabiilka dabada qabsaday ee USC,, SPM, la baxay ay oran doonaan marka la yidhaah hebel USC, ama SPM ayuu ka mid ahaa, ay ku jawaabi doonaan (Ma baryahaan waalnayn!).
Waa sugaynaa in booguhu buskoodaan oo miyirku soo noqdo maanku badalo waalida maanta socota ee lagu jiro.
Maalin baa imaanaysa ummaddu mar kale iney gacmaha is wada qabsato oo la is wada cafiyo oo dhiigaa la daadinayo lagu badalo wajiyo faraxsan oo dhalaalinaya ilkihii cadcadaa ee qofka Soomaaliga Ilaahay ku manaystay.
Waxaa muhiim ah in maanta qof walboo Soomaali ah oo danbiile (criminal) ah in la cadaadiyo waliba dibada loo soo tuuro oo waraabaha loo tuuro.
Hogaamiyiinta Soomaaliyeed ee maanta xukunka gacanta ku haysa waa kuwo aan ka waantoobeen daadinta dhiiga ummadda Soomaaliyeed oo malaa wakiil Somaliya uga ah malaga nafta qaada.
Iyadoo dhibaatooyinkuu Maxamed Siyaad gaystay aysan 100 sano buskoonayn, ayuu ninkan ka daran ee Cabdullahi Yuusuf la baxay doonaya inuu sidii Maxamed Siyaad Soomaali 21 sano u taliyo.
Soomaalidu waxay ahayd inuu nin waliba midka xun ee la qabiilka ah dhabarka u jeediyo, midka walaalkiis ah ee Ilaahay qabiilka kale ee fiican kasoo jeediyayna walaalsado.
Waa in Dawladnimada laga fogeeya yaa ila qolo ah, ee laga dhiga, yaa kaa bixi kara, yaa aqoonteeda leh, yaa wax wadi kara, yaa Soomaali ah, lana hawl galiyo inta fiican ee aqoonta leh ee dhalaalaysa.
Ninka looga shakiyo in uu fal xun faraha kula jiro ama uu danbi ka galayo shacabka Soomaaliyeed, khaa,inkaas oo kale dalka ka saara! ka saara! ka saara!
Caasimadii Muqdisho cadeey maanta Amxaar ayaa haysta, ooo waxaa loo baahanyahay in laga kiciy, dadka ka kicinaya ma aha shisheeye, ee innaga ayaa na,ilooga baahanyahay in aynu hawshaas fulino oo gacmaha is qabsano, waayo gacmo wada jir ayeey wax ku gooyaan, waxaan aaminsanahay hadii aynu daacad isu noqono oo meel uga soo wada jeesano Itoobiyaankan dalkeeni maanta jooga oo shacabkii Soomaaliyeed kula dhex dagaalamaya Somaliya dhexdeeda, waxaan hubaa in aynu meel isaga leexin lahayn oo waliba baacsan lahayn, maxayse kuugu taala aaway dadkii hawshaas fulin lahaa, Al-Shabaa iyo Maxkamaduhu dhib iyo geeri iyo gaajo ma waxaan ahayn ayeey soo kordhiyeen, hogaaminta dalka hadii loo daacad yahay waxaan qabaa in sidani si dhaami lahayd.
Ummadda Soomaaliyeed in malageedi galay oo ay halaagantay khaa,in iyo dambiile iyo kuwii caruuro Soomaaliyeed ceelasha ku guray, in ay ashkhaas noocas ah hawaystaan hogaaminta dalka iyo ummaddii ay toorayda dhabarka kala dhacayeen sow arrin lala yaabo amaba lagu qoslo maaha.
Raaligalin: Daarood, Hawiye, Isaaq.
Waxaan halkan uga mahadcelinaya dhamaan akhristayaasha aan ka helay waraaqaha iyo talooyinkii ay ii soo jeediyeen ee ku saabsanaa qoraaladii aan ka qoray qabaa,ilka Soomaaliyeed ee kala ahaa Daarood ,Hawiye iyo Isaaq.
Waxaan kaloo akhristayaasha sharafta leh ka cudur daaranaya magacyada qabiilka iyo ilaa iyo heerka hoose ee aan la tagay cuqdadaha, boogaha, iyo xagtimaha ku kala dhex jira Soomaali. Waxayna iila muuqatay sidaas si aan ahayn ineysan wax micno ah samaynayn.
Aduunku waa dugsi weyn oo nolosha ayaana macalin ka ah. Waxaadna maalin walba la kulmaysaa waxyaalo aad la yaabto. Hadii ay dhacdo dad Soomaaliyeed oo walaaladaa ah iney nolasha idin kulmiso oo aad la yaabto maamul xumadooda, dhaqan xumadooda iyo mararka qaar xumaatada ku jirta, waxaysan ka fursanayn inaad iska dul qaadato oo aad baryo iska wad wado si aad u ogaato maalinba maalinta xigta sida ay u fakarayaan, xumaatada ku jirta, sababta ay ugu jirto, inta ay gaarsiisan tahay, waxyaalaha khuraafadka ah ee ay iska dhaadhiciyeen ama aaminsan yihiin.
Aniga iyo shacabka Soomaaliyeed waxay noloshu na kulmisay dad isku sheegaya in ay yihiin Soomaali waliba wadaniyiin, laakin kasoo noqon waayay godkii ay madaxa la galeen, iyo cadaawadii qotoda dheer la gashay oo waliba qaarkood kusii indhacadyihiin.
Saddexdii qabiil ee Soomaaliyeed ee sharafta lahaa ee aan ka hadlay igama ahayn in aan ahay nin ay caadifadi ku jirto amaba ka buuxdo, sababta aan u qoray waxay ahayd in aan dareensiiyo shacabka Soomaaliyeed in QABYAALADU tahay wax xun oo ah shayga qudhah ee maanta inaga reebay xadaarada aduunku ku talaabasaday.
Aduunka cid walbaa soo martay, oo waxan la dhaho qabiil ama qabyaalada waa hore ayaa laga waynaaday oo laga ilbaxay, dadka Soomaaliyeed waxay aad u jecelyihiin qabiilka oo ay ka danbeeyaan, oo malaha qaarkood caabudaan sida Hindidu u caabado dabka iyo qoraxda.
Dal burbura oo uu ka dhaco dagaal sokeeye oo xasuuq ka dhaco maaha wax cusub ee waa wax waligeed soo jirtay, laakin dal dhan oo dadkii ku noola ay gacmahooda ku burburiyaan dalkii ay dhisteen ee maalkoodi, muruqoodi iyo maskaxdoodiba ku baxday ay u dhaqaaqaan in ay burburiyaan oo kaaga daranka ay daadiyaan dhiig dad Soomaaliyeed ah oo waliba walaalahooda ah Muslimnimo iyada meel iskaba dhig.
Hadaad Daarood, Hawiye iyo Isaaq nacayso, miyaanad ogayn iney dadkaasi ka mid yihiin rukumada ay dad ahaan Somaliya ku taagantahay maanta.
Dadka Soomaaliyeed ee kala ah Hawiye, Daarood iyo Isaaq waa dadka ay maanta Somaliya oo dhami ku taagantahay oo u ah rukumo, tiirar iyo udubyo aan waligood dhaqaaqin oo maanta iyagoo is xasuuqay hadana ay ku sii hadhay in yar oo qiiro Soomaalinimo ah.
Dhamaan walaaladaydaas kasoo kala jeeda saddexdaas qabiil waxaan leeyahay iga raali galiya arrinta foosha xun ee waliba laga yaqyaqsado ee maangaabnimada ah ee aan ka hadlay xilligan lagu jiro 2008 ee lasoo dhaafay xiligii qabiilku sida xun inoo saameeyay 1990.
Qabiil wada fiican ma uu jiro, mid wada xuna ma uu jiro, laakin shakhsi kaliyah oo xun wuu jiraa sida shakhsi fiicani u jiro, qabiil dhan lama wada nici karo, laakin shakhsi kaliyah waa la nici karaa haduu saxaroobo, laakin Dawladii Soomaaliyeed iyo dadkii hogaamin lahaa hadey noqdeen dad wada xun oo shakhsi ahaan saxaroobay oo waliba wixii ay ku saxaroobeen dabada haysta, xalku sida uu noqon doono Caza Wajalaha mooye, cid kale ama qof kale oo sheegi karaa ma uu jiro, dhamaan dadka Soomaaliyeed ee maanta ay dhibaatadu lasoo daristay Ilaahay ayeey jawaab ka wada sugayaan, xiligii ay Somaliya nabadii iyo barwaaqadeedi usoo noqon lahayd ayaa soo dhaw, insha alaah.
Abdikarim Ahmed Huseen.